Isi 10 nke Tour de France - ULLER
Isi 10 nke Tour de France
Ọ bụrụ na ị hụrụ egwuregwu na ịgba ịnyịnya ígwè n'anya, ị ga-amaworị na Tour de France bụ otu n'ime ihe omume kachasị mkpa na nke nnọchi anya nke ọzụzụ a, yana otu n'ime ihe siri ike na nke na-akwụghachi ụgwọ maka ndị sonyere ya. Kwa afọ ọtụtụ narị ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-aga ikpuchi ihe karịrị 3000km na usoro 21 nke ọsụsọ, mbọ na nraranye bụ atọ n'ime ndị isi protagonists. Kemgbe afọ 1903 nke ewepụtara njem ahụ, yana ihe karịrị mbipụta 100, akụkọ na ihe omume emeela nke mere akụkọ ihe mere eme na ụwa nke ịgba ígwè na ị ga-achọ ịma. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụrụ na / ma ọ bụ soro ịdọ aka na ntị a, ihe ịma aka iri a gbasara Tour de France masịrị gị!
1. Oge a mụrụ Tour de France.
Emere Tour de France na nke mbụ ya na 1903 wee bido na mkpokọta 6 nke ihe dịka 400km ọ bụla.
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ French L'Auto y Kpuchido ya ndị kpebiri ịchọta Tour de France mgbe ha ghọtara ama nke ịdọ aka ná ntị a. Kpọmkwem, ọ bụ French Henri Desrange, onye nduzi nke ndị na-ahụ maka egwuregwu L´Auto, onye kpebiri ịkwalite atụmatụ a iji nweta arụmọrụ akụ na ụba ka ukwuu n'akwụkwọ akụkọ ya. Oge ọ bụla peeji nke mgbasa ozi ndị a gụnyere ozi gbasara ịgba ịnyịnya ígwè, ahịa ha na-abawanye nke ukwuu. N'ezie, mgbe mbipụta nke mbụ nke Tour na dechara nke ọ bụla nkebi na ngagharị nke ndị sonyere na kwa ụbọchị, akwụkwọ akụkọ niile apụ n'anya na Parisian newsstand na ihe nke awa. Ndị mmadụ nwere mmasị ịmatakwu banyere ịdọ aka ná ntị nke, na mgbakwunye na ikwe ka ọpụpụ ngwa ngwa ma dị mfe, mekwara ka izere agha na nsogbu mmekọrịta ọha na eze n'oge ahụ.
Kemgbe ọtụtụ afọ na ihe ịga nke ọma nke Tour de France rụpụtara, ọha mmadụ agbasoro nke ọ bụla mbipụta nke asọmpi a na ala nke egbe ala, na-ekwenye ihe ndị nta akụkọ French tụrụ anya na mbido ha: ndị na-ege ntị na mgbasa ozi nke Nkwukọrịta na ire ahịa ede ederede na-abawanye oge ọ bụla a na-atụle ịgba ịnyịnya ígwè.
2. Mgbe mbụ Tour kpuwere onye mmeri mbụ ya.
Onye mmeri mbụ nke asọmpi a dị mkpa na 1903 bụ onye na-agba ígwè Maurice Garin, bụ onye meriri Tour de France mgbe ụbọchị iri na itoolu na mpaghara 19 dị ihe dịka 6km ọ bụla. N'oge ahụ, ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba otu ịnyịnya ígwè n'otu asọmpi ahụ, ọ bụrụ na o mebiri emebi, ha ga-edozi onwe ha na-agbanweghị ya. Na mgbakwunye, Garin ga na-agba Njegharị n’abalị, eziokwu nke ewepụrụ afọ abụọ ka e mesịrị n’ihi enweghị nchekwa ọ metụtara. N'agbanyeghị mmeri a mere eme, Maurice Garin, amụrụ na Italy ma zụlite na Lens, France, sonyeere ọzọ n'afọ na-esote ya, ewepụ ya maka ịme ụgbọ ala. Onye na-agba ịnyịnya ígwè ahụ nyere aha ya velodrome ka dị ugbu a n'obodo Lens, nyekwa otu n'ime okporo ámá ndị a ma ama na Maubeuge, France.
3. Mgbe a chọpụtara onye mbụ na-agba ịnyịnya ígwè doping.
Vicente Blanco bụ onye na-agba bọl na Spanish na-aga nke ọma nke sonyere n'ọtụtụ asọmpi na ọzụzụ a kemgbe ha malitere ịme ya, gụnyere Tour de France. Obere oge tupu o sonye na asọmpi a, Blanco tufuru ọtụtụ mkpịsị ụkwụ, eziokwu nke nyere ya aha ahụ bụ "El lame", mana n'agbanyeghị nsogbu anụ ahụ ya, ọ gara n'ihu na-asọmpi ọkachamara. Ọ bụ n'oge a kpọmkwem mgbe Spanish malitere ọrụ ya na doping ma ọ bụ doping.
Na 1910 o sonyere na Tour de France n'agbanyeghị nhụjuanya ahụike siri ike, ma ọ bụrụ na ọnọdụ ọjọọ ahụ enyela ndị niile so na ya nsogbu, ha mere nke ahụ karị na ndị nwere ọrịa ọ bụla dịka ya. N'ụzọ dị otú a, Vicente Blanco kwetara na ọtụtụ ndị ọgba ịnyịnya ígwè ibe ya ka ha zukọta n'ebe ndị dị mkpa n'akụkụ nke ọ bụla nke Tour iji nye ya nri iji nweta uru ma si otú a na-aga n'ihu asọmpi ahụ n'enweghị nsogbu. N'ụzọ dị otú a, ndị Basque cyclist ghọrọ otu n'ime ndị mbụ na-eji doping na ịdọ aka ná ntị nke ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara site na nri.
4. Mgbe Tour de France na-agbasa ozi maka oge mbụ.
Ọ bụ n’afọ 1930 ka a malitere ịgbasa asọmpi ịgba ịnyịnya a ma ama na redio, mana ọ bụ n’afọ 1952 ka a malitere itinye ihe ndị si na Tour gaa na telivishọn. Asọmpi a enweela ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na ndị na-akwado ndị na-akwado ndị na-agba ịnyịnya ígwè kachasị amasị ha n'ụlọ ha, ebe ha maliterela nnukwu ụzọ mgbapụ maka ndị bi na Europe n'oge agha na esemokwu mmekọrịta nke oge ahụ. Ka ọtụtụ afọ gafere na njem ahụ aghọwo otu n'ime ihe omume kachasị dị mkpa na ọzụzụ a, a na-agbasa ya na ọkwa ya na ngalaba ya niile.
5. Oge Yellow Jersey pụtara
Mgbe mbipụta mbụ nke mmeri nke Tour de France, Agha Iwa Mbụ rutere Europe na 1914, si otú a gbochie usoro ndụ na egwuregwu nke ụmụ amaala niile nke kọntinent a. Mgbe ọtụtụ esemokwu agha na ngụkọta na mgbanwe zuru oke na mpaghara mmekọrịta mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke oge a, Tour de France laghachiri afọ anọ ka nke ahụ gasịrị, na 1918, na-etinye akwụkwọ ọhụrụ nke ga-anọ: acha odo odo. Ebumnuche nke ihe a bụ ịmata ọdịiche nke onye ndu nke ọkwa na ndị ọzọ na-agba ọsọ na asọmpi na agba odo ya na-ezo aka na akwụkwọ akụkọ nke akwụkwọ akụkọ French L´Auto, onye onye nduzi ya bụ isi onye malitere njem ahụ. Taa uwe a ka edobere nwere otu nzube dị ka mbido ya.
6. Oge mgbe Lance Armstrong tụfuru mmeri ya niile.
Onye ọgba tum tum na America bụ Armstrong bụ onye kachasị nweta mmeri nke Tour de France, na-enwe mmeri ugboro asaa site na 1999 ruo 2005. seemednye yiri ka ọ bụ ihe dị mkpa na ịgba ịnyịnya ígwè boro ya ebubo n'ọtụtụ oge nke ime omume doping na Tour mgbe ọ havingụrụchara ihe dị ka steroid, cortisone, testosterone ... Armstrong, bụ onye tara ahụhụ kansa kansa na testicular na 1996, kwuputara na ya eri ụdị ihe ndị a mgbe emechara ya ịwa ahụ iji merie ọrịa ahụ.
Ndị dọkịta France, ndị ọgba tum tum ibe ya na ndị mgbasa ozi bidoro ịlụ ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke mechara bụrụ nkwụsị nke mmeri ndị America nke asaa nke de de France, yana mmachi oge niile na ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara.
7. Mgbe njem kachasị ogologo na akụkọ ntolite mere.
Na 1926, Tour de France nwere usoro 17 nke ihe dịka 330km kwa ụbọchị, na-eme ihe karịrị 5000km, ndekọ na-akarịbeghị. Ugbu a Tour de France nwere ọkwa ndị ọzọ, mana obere kilomita, na-agaghị agafe 3500km na nke ọ bụla mbipụta ya. N’afọ 1926, ndị gbara ịnyịnya ígwè 126 sonyere, n’ime ha naanị 41 rutere n’isi njedebe. Onye mmeri bụ onye Belgium bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè Lucien Buysse, bụ onye jisiri ike mezue usoro niile ahụ na ọsọ ọsọ 24km / h.
8. Mgbe onye ọgba tum tum Britain aha ya bụ Tom Simpson nwụrụ na Tour de France.
Tom Simpson bụ ezigbo onye egwuregwu pụrụiche n'okporo ụzọ na egwu onye na 1967 tụfuru ndụ ya na Tour de France n'ihi nsị nke amphetamines na mmanya na-aba n'anya, ogo dị elu nke etinye ya na asọmpi na nkụda mmụọ. N'agbanyeghị na ahụ esighị ike ya dịka Briton na ọtụtụ dara na njem ahụ niile, Simpson siri ọnwụ na ọ ga-agba ọsọ ruo kilomita ole na ole site na njedebe ọ tụbọrọ ma nwụọ.
9. Mgbe Chris Froome gbara ọsọ na njem na 2016.
Anyị na-ekwu maka Christopher Froome, onye ọgba tum tum Britain nke amụrụ na Kenya ka a lere anya dị ka onye kachasị ike n'ụwa n'ọsọ egwuregwu, onye meriri 2 nkebi na Giro d'Italia, 5 na Vuelta a España na 7 na Tour de France, n'etiti ọtụtụ mmeri ndị ọzọ.
Ọ bụ na 2016, ịbụ onye ndu nke Tour de France n'oge ahụ, mgbe Chris Froome gbapụrụ ịnyịnya ígwè ya n'ihi ihe ọghọm nke ọgba tum tum nke nzukọ ahụ na ọtụtụ ndị ya na ya gbara ma manye ya ịgbago Mont Ventoux, naanị 500 mita site na njedebe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ ọnwụ nke uwe ojii na-acha odo odo ma emesịa jisie ike pụọ na ọnọdụ a na-adịghị ahụkebe.
10. Mgbe emebie njem nke Tour de France, na-agbagharị wiilịii.
Mbipụta nke 1905 gosipụtara sabotaji nke ndị na - eme njem nlegharị anya bụ ndị tinyebere 125kg ntu na okporo ụzọ nke ngalaba dị iche iche nke ndị na - agba ịnyịnya ígwè Tour de France ga - agafe, na - egbochi ịnyịnya ígwè ha mgbe ha tara ahụhụ na ụkwụ ha na enweghị ike ịnyere aka, ebe ọ bụ na n’oge ahụ ka naanị ịnwe otu ịnyịnya ígwè ka a na-anabata na njem ahụ niile. Amabeghị onye dere ndị mere ihe omume a, mana ihe kpatara ya bụ: mgbanwe na iwu asọmpi ahụ, wee wepu ngalaba abalị nke njem ahụ iji zere ịghọ aghụghọ ule na ihe egwu dịịrị ndị sonyere, bụ ndị na-anaghị enwe ọhụụ ọ bụla. .
Obi abụọ adịghị ya na Tour de France bụ otu n'ime ihe omume kpakpando maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ndị na-agba ịnyịnya, mana ị maraworị ọchịchọ ịmata ihe ndị a 10 banyere asọmpi a dị mkpa?
AJREJRE A NA-AJREKAR AB GBASARA ND THE ỌR OF France
Olee ọtụtụ usoro nke Tour de France nwere?
Asọmpi a nwere usoro nke iri abụọ na otu na nsoro dị ihe dịka puku kilomita atọ.
Ebee ka Tour de France kwụsị?
Kemgbe mbipụta mbụ ya na 1903, Njem ahụ gwụchara na nnọchi Champs Elysées na obodo Paris. Enwebeghị mbipụta ọ bụla nke nke a na -adịghị ka ọ dị.
Kedu ụdị ụzọ nke Tour de France?
The Tour de France nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na-ewere ọnọdụ na asọmpi ahụ. Ndị a bụ: nhazi ọkwa dị larịị, ugwu ọkara na nnwale oge onye ọ bụla. N'ime ugwu ahụ, e nwere ọkwa atọ dị iche iche, yana HC bụ ụdị kachasị elu.
Nnwere onwe gafee ugwu ahụ ... Nkuzi na ihe ọmụma maka ezi freeriders!
Rịgo ugwu bụ nnwere onwe bụ okwu kachasị ya! Isiokwu a bụ maka ndị hụrụ gị n'anya nke freeride bụ ndị n'afọ a chọrọ karịa ka ha na-eche na adrenaline na-agba ọsọ na veins ha. NA
Chọpụta ugo na-acha uhie uhie: njem kachasị mkpa ịgba ígwè na Spain
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ịgba ịnyịnya ígwè na egwuregwu a gụnyere, ikekwe ị maraworị njem njem kacha mkpa na Spain; Ugo Ubi Bearded. Ọ ga-abụ akara aka gị ọzọ ma ọ bụrụ
Linggba ọkpọ nke ọma: Ihe 10 ịmaghị banyere egwuregwu a
You nwetụla mgbe ị na-eche otú, ebe na mgbe mbụ igwe malitere? Wasnye bụ amamihe ahụ nke hapụrụ anyị ọmarịcha ụzọ njem a? Kedu ihe kpatara eji asọ asọ asọmpị ịgba ịnyịnya? SW
Oge gboo nke ịgba ịnyịnya ígwè na Europe
Naanị ndị anyị na-agba ịnyịnya ígwè maara ahụ ọkụ nke na-agafe na akwara anyị mgbe anyị na-ele asọmpi ahụ site na sekit kachasị achọ na Europe. Mara ihe bụ Ncheta nke Ci
Ihe ndị dị mkpa maka omume nke Freeride Skiing
Egwuregwu na enweghị iwu? Ọfọn ... enwere ike ịnwe nnwere onwe na omume nke ịgba ọsọ Freeride, mana buru n'uche na ka nnwere onwe ka ukwuu, ibu ọrụ dị ukwuu. Soro ndụmọdụ anyị na-akụziri gị
Ndụmọdụ ịmalite na Enduro MTB cgba ígwè
You maara ebe okwu Enduro si? ntachi obi, nke n’asụsụ Bekee pụtara, iguzogide. Ma ọ bụ na ụdị a nke MBT, chọrọ nguzogide, ọsọ na kwa, nnwere onwe. N’isiokwu anyị
Onye kacha sie ike Ironman n’ụwa
Ihe ịma aka na ikike mmadụ nwere imeri ha. Nwere ike iche n’echiche ime kilomita 226 n’agbata ọsọ, igwu mmiri na ịgba ịnyịnya ígwè, n’ime ihe na-erughị awa 17? Onwere ndi mmadu di elu, ma ndia bu ndi ozo
O siri ike ịchọta onye na-anụbeghị banyere Tour de France mana ... Do chere na ị maara ihe niile gbasara egwuregwu egwuregwu a? Gụọ na ịchọpụta 10 ihe